ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖြစ်သူနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး တို့နှင့် | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖြစ်သူနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး တို့နှင့်
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖြစ်သူနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ - ၃၀
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖြစ်သူ Dr. Julian Thomas Hottinger နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Tim Enderlin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ဦးစွာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း(၄)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက် များအပေါ် တပ်မတော်အနေဖြင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်အ၀ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေ အနေများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများအား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ ခေါင်းဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှစီစဉ်နေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းနောက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖြစ်သူ Dr. Julian Thomas Hottinger နှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန် နိုင်ငံတကာက ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အတွေ့အကြုံများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အခြေအနေများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး တို့နှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖွဈသူနှငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသံအမတျကွီး တို့နှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
နပွေညျတျော၊ အောကျတိုဘာ - ၃၀
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖွဈသူ Dr. Julian Thomas Hottinger နှငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Tim Enderlin ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့နှငျ့ ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျ ရိပျသာ၌ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးသညျ။
ဦးစှာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့ NCA လကျမှတျရေးထိုးခွငျး(၄)နှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျအခမျးအနား အောငျမွငျစှာကငျြးပနိုငျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ လှတျလပျသော စုံစမျးစဈဆေးရေးကျောမရှငျ၏ ဆောငျရှကျခကျြ မြားအပျေါ တပျမတျောအနဖွေငျ့ တာဝနျယူမှု၊ တာဝနျခံမှုအပွညျ့အဝဖွငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွေ အနမြေား၊ မွနျမာ့တပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြားအား ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသို့ ခေါငျးဆောငျစီမံခနျ့ခှဲမှုနှငျ့ ငွိမျးခမျြး ရေးဆိုငျရာ သငျတနျးအတှကျဆှဈဇာလနျနိုငျငံမှစီစဉျနမှေု အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးကွသညျ။
ယငျးနောကျ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ဖွဈသူ Dr. Julian Thomas Hottinger နှငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိစရေနျ နိုငျငံတကာက ကငျြ့သုံးဆောငျရှကျ လကျြရှိသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားနှငျ့ အတှအေ့ကွုံမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး)နှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ၊ Federal Department of Foreign Affairs မှ Senior Mediator ၊ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသံအမတျကွီး တို့နှငျ့အတူ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။